Not Cash, Demand Draft Only Please! in paying Consular Fees
Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, New Delhi :: NEWS :: Important Announcements Issued by Myanmar Embassy
Subject: Not Cash, Demand Draft Only Please! in paying Consular Fees Fri Jan 30, 2009 5:07 pm
ဗီဇာခပေးသွင်းခြင်း၊၀င်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ခြင်း နှင့်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အသစ်ထုတ်ခြင်း ထောက်ခံစာအမျိုးမျိုးလျှောက်ထားရယူခြင်းများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာသံရုံးသို့ ပေးသွင်းသည့် ကောင်စစ်ခ များအား Demand Draft ဖြင့်သာ ပေးဆောင်ပါရန်.အထူးမေတ္တာ ရပ်ခံ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်၊
Demand Draft များကို အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် မြို့ရွာများ တွင်
နယူးဒေလီမြို့၌ ဘဏ်ခွဲများရှိသော မည်သည့် ဘဏ်၌မဆို ၀န်ဆောင်ခအနည်းငယ်မျှဖြင့်
ဆောင်ရွက် ရယူ နိုင်ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ချန်နိုင်းမြို့မှ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင် မြန်မာကျောင်းသားတစ်ဦးမှ ၄င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အား သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာသံရုံးသို့ပေးသွင်း သော သက်တမ်းတိုးခ ရူပီး 7333/- အတွက်ပြုလုပ်ပေးပို့သော Demand Draft တစ်ခုအားနမူနာအဖြစ်အောက်ပါ အတိုင်း ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။
It would be greatly appreciated if you could kindly pay any consular fees such as Visa fees, Income Tax , matters on Myanmar Passports and various attestations by Demand Draft only but, not cash .
The sample of Demand Draft can be viewed above for your reference and information.
Thank you very much for your kind cooperation and understanding